कांग्रेसलाई पोखरेलको सुझाव : सडकमा होईन, चुनावको तयारीमा लाग्नुहोस « रिपोर्टर्स नेपाल
कांग्रेसलाई पोखरेलको सुझाव : सडकमा होईन, चुनावको तयारीमा लाग्नुहोस
काठमाडौं, २५ माघ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ओली पक्षका प्रभावशाली नेता तथा पूर्वमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले सरकार र आफ्नो पार्टी चुनावको तयारीमा होमिईसकेकोले सबै दलले पनि चुनावको तयारी गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
आज (आइतबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै उनले निर्वाचनको तयारीस्वरुप आफ्नो दलले विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम गरिराखेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा अहिले अदालतमा बहसको क्रममा छ । अहिले परिस्थिति कता जान्छ ? के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न छ । कतिपय सन्दर्भमा, प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक वा गैरसंवैधानिक भनेर पनि बहस छ । सत्ताधारी दलभित्र जुन परिस्थ्तिि उत्पन्न भयो । आफ्नै पार्टीका साथीहरुबाट प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने तयारी थियो । प्रतिनिधिसभाको विघटन धारा ५८ अनुसार विघटन भएको हो । प्रतिनिधिसभा विघट गर्नु प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो ।’